Darmstadt University of Technology - Chidzidzo Engineering muGermany
Darmstadt University of Technology Details
guta : Darmstadt
Acronym : ini
inotangwa : 1877
Musakanganwa kuti kurukura Darmstadt University of Technology
Kunyoresa pana Darmstadt University of Technology
Kuti matambudziko inogona kuenderera mberi nzanga yedu uye upfumi, tinofanira kutyaira, Network uye uongorore zvakare pfungwa dzedu uye kushandiswa kwemichina. Pana Darmstadt University of Technology, isu kutarisa nyaya michina chokuita; isu vaedze nzira itsva uye kunozarura mikana mitsva.
masayendisiti Zvatinoita seminal zvinokosha pakutsvakurudza creatively kushandura nzwisiso vavo kwesayenzi rokugadzirisa. Mabikirwo ivo kusika inonyatsoenderana smartly kupinda kunzwisisa uchishandisa runyararo. vadzidzi vedu kudzidza synthesize kutsvakurudza zvakaisvonaka uye anoshanda applicability kubva pakutanga.
Ndinotenda kuti mumwe nesayenzi kuti pose mabasa ramangwana kuti pokuzotangira kutsigira, zvimwe kubudirira. Darmstadt University of Technology ndomumwe mumayunivhesiti muGermany kutungamirira zvemichina, uye kuzivikanwa pasi pose nokuda kwayo kupayona kubudirira. Inosanganisira nematambudziko ramangwana pakutsvakurudza wakanaka muminda vakasarudzwa uye dzidzo vomuzana zvazvingava.
Professor Dr. Hans Jürgen Prömel, mutungamiriri wenyika, Darmstadt University of Technology
A vaitungamirira University zvigadzirwa
Kubvira panheyo dzaro 1877, Darmstadt University of Technology akaita wayo chikamu tichipindura zvokukurumidzira nyaya ramangwana kupayona kuita uye kunoshamisa kutsvakurudza uye teaching.TU Darmstadt focusses pamusoro vakasarudzwa, zvikuru akakodzera dambudziko nzvimbo. Technology ndiwo moyo nokuranga yedu zvose pana TU Darmstadt. The Natural Sciences uyewo Social Sciences uye Humanities pamwe pamwe Engineering.
Kuti kuwedzera unyanzvi wayo sokuronga, TU Darmstadt anoramba zvakasiyana siyana kudyidzana mapoka uye tsvakurudzo nemasangano. Chinhu chinokosha kutyaira simba mune zvoupfumi uye kwesayenzi kwemashoko muFrankfurt-Rhein-Neckar mumaguta nharaunda.
Kutsvakurudza kwedu hwakaisvonaka kwave kuzivikanwa vakawanda kwepamutemo mukati Excellence Initiative. Vakapedza kudzidza kwedu kunakidzwa mukurumbira wakanaka zvebhizimisi. waivako yedu unoshamisa kunoita kuti mumwe vaitungamirira mumayunivhesiti ruzivo muGermany uye chakabereka isu maonero dzakawanda uye vakakurumbira. Parizvino mumwe pamusoro munyika 100 mumayunivhesiti nokuti engineering zvigadzirwa maererano vose THE World University Rankings uye QS World University Rankings.
Students uye zvidzidzo panguva Darmstadt University of Technology vanobatanidza hunoshamisa tsvakurudzo pamwe zvakasimba inoshanda applicability. Izvi ndizvo zvatinoziva mikana yakanakisisa pamusoro rungs ose upward.
Isu vakakodzera vataidzidzisa kuti avape mabasa mune zvesayenzi uye bhizimisi kosi kuti kutsvakurudza vaifarira, asiwo muvagadzirire zvinodiwa kushanda upenyu. vadzidzi vedu ichishanduka kupinda rokusika, akasiyana vanhu. Yemarudzi hunhu yemazuva edu anovimbisa okukura ruzivo uye kubudirana pachena kune vadzidzi dzakawanda. A dhigirii kubva TU Darmstadt unobereka unhu chitaridzi inovhura yakanakisisa basa mikana.
Pana Darmstadt University of Technology, masayendisiti muchawana nekurukurirano yakanaka, zvikuru rutsigiro zvakatipoteredza vose post-akapedza basa uye mimwe mabasa kwesayenzi. Vanoshanda zvikwata dzakawanda uye pedyo pamwe zvedzidzo uye ezvokutengeserana vadyidzani. netsika TU Darmstadt kwakaita pamwe kungabatsira nzira inokosha kubudirira.
Civil Engineering uye Geodesy
Electrical Engineering uye Information Technology
History uye Social Sciences
Zvinhu uye Earth Sciences
Energy Science uye Engineering
On 10 Gumiguru 1877 Ludwig IV, Grand Duke pamusoro Washington uye Rhine (Grand Duke pamusoro Hessen), vakatumidza Polytechnic School Technical University of Darmstadt (Darmstadt Polytechnic) uye pakudaro akamutsa mamiriro sangano iri dzidzo kuti ane yunivhesiti zvokuti Abitur (dhipuroma kubva German uzokwanisa kuyunivhesiti kubvuma kana matriculation yechipiri chikoro) akava hwaro rubvumo. mu 1899 ari TH Darmstadt akapiwa kodzero mubayiro doctorates.
Nhoroondo The University ndiyo akasiyana: maitikiro aro okutanga yakatanga yepamusorosoro Trade School (Higher Trade School), iyo rakaumbwa 1836 uye akagamuchira pachako chivako chacho pedyo 'vanha Pädagog’ musi Kapellplatz mu 1844, uchiteverwa Technical chikoro (Technical School) mu 1864 uye Grand ducal Hessian Polytechnic School (Grand ducal Hessian Polytechnic) mu 1868. Panguva iyoyo, Nhaurirano nenharo vakaramba rakaitirwa enyika madenderedzwa ari nyaya kana zvakadaro murombo ezvinhu sezvo Grand Duchy pamusoro Hessen nezvaaigona sangano edzidzo ari zvazviri nezvatinovavarira yepamusoro, kana kunyange polytechnic. Pashure nheyo TH Darmstadt mu 1877, nhamba mudzidzi akaramba Zvazvakadaro pasi kuti mumakore kubva 1881 kuti 1882 paiva refu nharo paruzhinji pamusoro nokuvhara pasi University. In izvi zvakaoma, dzemo hurumende uye University akaita akashinga sarudzo amutse chigaro pamusoro zvemagetsi okugadzira yokutanga munyika. Nokudaro School of Electrical Engineering raivapo sezvo wechitanhatu mano TH Darmstadt, yaiva chinhu chitsva chiri academia, nekuti kusvikira zvino hapana mumwe polytechnic kana kuyunivhesiti akanga yayo rorusununguko Electrical Engineering. Izvi ramangwana yepamusoro dzidzo gwara rwakagadzirira nzira Darmstadt kutora rimwe kutungamirira chinzvimbo kukurumidza kuva munda Electrical Engineering, izvo zvakatoita kuti akaramba ndichifumira nhamba yevadzidzi, kuti kuvhara of TH Darmstadt haana achibvunzwa zvakare.
mu 1895 Zvivako zvitsva akavhurwa Hochschulstrasse: kuti 'Old Main Building’ (kuti 'Old Main Building’ yeYunivhesiti) uye akatanga kuvaka zvakananga pakatarisana. Mumakumi emakore maviri pamberi Hondo Yenyika I, anoranga ari kuyunivhesiti zvose vakaidzwa diversification uye kuwedzera. New anoranga akadai Paper Making uye Cellulose Chemistry vakanga vawedzera, uye sezvo mangwanani sezvo 1913 mumwe weKomiti Aeronautics uye Flight Mechanics hwakagadzwa.
Zvichakadaro, zvematongerwo enyika zvakanga zvava kungokakavadzana, uye kukura polarization enyika zvakaputika Darmstadt pamusoro mubvunzo yevadzidzi vatorwa. The TH Darmstadt aiva zvemariro vazhinji vadzidzi vokune dzimwe nyika. mu 1906, semuyenzaniso, sezvo vakawanda zvitatu mumativi ari Electrical Engineering vadzidzi vaibva kune dzimwe nyika, kazhinji kubva inoti okumabvazuva Europe.
Pashure peHondo Yenyika I pakanga pari kudiwa zvinhu dzidzo ino panguva TH Darmstadt, izvo zvakaonekwa sechinhu chinodiwa kuti zvinodiwa munhu ano maindasitiri muvanhu. Nhaurirano zvikuru yaiitwa musi chinangwa pakukoka zvezvaidzidziswa mhiri evasingatombonamati hwokugadzira dzidzo kuti kugadzirira injiniya nokuda kwake kutungamirira basa revanhukadzi. Danho kongiri mune mirayiridzo uyu wabatwa 1924, apo 'General weVadzidzisi Vedare', iyo kusvikira panguva yakanga kubatanidzwa vose vasiri rwokugadzira nyaya, yakakamurwa kuva Department of Mathematics uye Natural Science uye Department of Cultural Studies uye Political Science. Uyezve, matanho akatorwa kupa vadzidzi ruzivo panze avo yakamanikana munda yokudzidza raisanganisira upgrading pamusoro Economics uye kusikwa professorships mu Political Science, History of Technology uye wemagariro evanhu.
Pausiku 11/12 Gunyana 1944, makumi masere muzana muguta, kusanganisira vakawanda zvivako yunivhesiti yacho, vakaparadzwa panguva nebhomba kurwisa. Kwenguva pfupi muna 1945 zvikamu TH Darmstadt angadaro akavharwa ne chirevo dzairwisa risati yakavhurwazve mu 1946. The zvemagetsi ouinjiniya dhipatimendi akaramba akaramba dzichipfekeka, kuita basa pasi chibvumirano pamwe U.S. Army kuvaka zvinoumba ari V-2 nhungamiro hurongwa. “Asi tinofanira kungwarira kuti isu shoko iri kugadzirwa kuitira nekuti hatidi vokuRussia kuziva kuti tiri cranking kukwira V-2 hurongwa.” Pasinei yakaoma post-hondo mamiriro ezvinhu, yunivhesiti tsvimbo uye vadzidzi zvakafanana vakakwanisa kugara pasi kuti basa yunivhesiti iri dzaparadzwa zvakakomba zvivakwa, izvo zvaifanira kushandiswa senzvimbo chinochechenya mhinduro.
Kare 1947 ari TH Darmstadt Played nehondo yokutanga 'International Conference musi Engineering Education – kodzera’ (International Congress musi Engineering Education), panguva iyo vechikamu vakakurukura yetsika basa iri michina intelligentsia uye yesayenzi vepamusoro mune zvematongerwo enyika uye munzanga. Tichifunga migumisiro yakaipa muhondo, vechikamu (kunze vokuAmerica,vakanga vatova chibvumirano ne THD fakaroti kuramba chombo budiriro), vakazvipira pachavo zvino kutsvakurudza uye vachidzidzisa engineering zvesayenzi anoranga kuvinga rugare kukura vanhu.
Matauriro yakapiwa Dr. James R. Newman, Kumutungamiriri American Military Hurumende Hessen, zvisinei, akaita NO kumbotaura munhu kuzvipira kwakadaro, apo achitaura kuti:
“Yo- izvi [takambosangana], pamwe pfungwa uye nzira dzidzo pamwe okugadzira mitsetse, achaita kubatsira zvikuru, kwete chete vavakezve rokurwa zvakabvaruka munyika, asiwo kuuyisa famba zvakasikwa kunzwisisa nokuremekedzana, uye rudo izvo kwakatadzisa kunzwisisa, kuti kubvumidza, kuremekedza, uye rudo saka zvakakodzera kuti runyararo, rufaro, uye kugutsikana kuti ari kurota munhu wose pasi pano.”
The post-hondo nguva yokuvakazve zvikuru papfungwa huru pakukura chirongwa kuma1960, hwaishandiswa mumayunivhesiti uye hurumende pavakatambudzwa kuramba ndichifumira nhamba yevadzidzi. Sezvo anenge hapana nyika yaiwanika muguta muzinda rokuvaka itsva, chisarudzo akaiswa 1963 kushandisa 'Lichtwiese’ (aimbova Banga pamusoro kweguta) sezvo nzvimbo zvokuvaka Extensions kuna TH. Saka mukupera Kuma1960 uye mukutanga muzvivako kwema1970 vakawanda, kusanganisira itsva mudzidzi rokubika, vakanga Ndokumisapo ikoko uye pakupedzisira akava yunivhesiti rechipiri kembasi.
pashure 1968 ari kuchinja yunivhesiti, wavakanga anosarudza mudzidzi sangano, akanga kutanga kutora chimiro vaviri panguva imwe nyika uye remunharaunda pamwero. It zvainanga nokusika zvakajeka yunivhesiti zvivako uye kunobatanidza nhengo dzose yunivhesiti kusarudza pezvakaitwa. mu 1970 kuti 'Hessian Higher Education Act’ (Yepamusoro Education Mitemo of Federal State of Hessen) akapinda simba. Izvi akapa TH Darmstadt, pamwe nemamwe Hessian mumayunivhesiti uye polytechnics, chivakwa itsva kunobva kutanga vemutungamiri mutemo rakabatana Kutarisirwa uyewo tumisoro yeYunivhesiti mamiriro kupinda zvikoro.
Pakati pezana kwema1970 paiva nomumwe nokukurumidza kuwedzera nhamba mudzidzi. Staff budiriro, zvisinei, lagged kure shure, zvichikonzera hakudzivisiki kurambidzwa kubvuma zvavakatemerwa kana nehurumende kana University. Pasinei mudonzvo wacho rinorema pokuwanda kwebasa, ari TH Darmstadt akakwanisa kumisa nzira yeramangwana, sezvinoratidzwa School of Information Science, dzakasimbiswa 1974, kuti 'Center kuti Interdisciplinary Technology Studies - QUOTE’ (Center nokuti Interdisciplinary Studies musi Technology), rakavakwa 1987, uye Chikoro Materials Science, dzakasimbiswa 1989. School This, iyo inopa nzira itsva zvidzidzo kwave muNzvimbo chivako chitsva pamusoro Lichtwiese kubva 1996.
Pakazopera zana remakore rechi20, ari TH Darmstadt akanga wepamutemo mamiriro kuyunivhesiti, uye akanga chipiriso yakafanana-siyana, kwemakore anopfuura zana nemakore. For kwezvikonzero izvi, uye pamwechete chinangwa arodzwe paruzhinji uchinzwira kuyunivhesiti kuti chinzvimbo pamba uye kunze, ari TH Darmstadt Yakazopiwa zita rokuti Technical University of Darmstadt (zvaro Chirungu zita pamutemo riri Technical University of Darmstadt kunyange anowanzonzi Darmstadt University of Technology) pamusoro 1 Gumiguru 1997. zita iri kuchinja pamwe pamusana kusanzwisisana zvakanga kwakaitika vaitaura Chirungu nyika, apo 'Institute of Technology’ akanga kazhinji akaguma akashandurwa se 'Technical High School', nokupa zvachose anotsausa yokureva.
Unoda kurukura Darmstadt University of Technology ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Darmstadt University of Technology musi Map
Photos: Darmstadt University of Technology pamutemo Facebook
Darmstadt University of Technology wongororo
Join kukurukura pamusoro Darmstadt University of Technology.
University of muLübeck muLübeck
YokuHannover Medical School yokuHannover